IHodges U Ebizwa ngo-2020 ngeyona ndlela igqwesileyo kwiKholeji yeeVets ngamaXesha eMikhosi
IYunivesithi yaseHodges ebizwa ngokuBalaseleyo kwiiKholeji zeeVets ngamaXesha amaMikhosi nge2020
IYunivesithi yaseHodges iyakhathala ngamagqala ethu kwaye iyabonisa. Amaxesha oMkhosi kubonakala ngathi ayavuma, ukhetha iYunivesithi yaseHodges njengenye yeekholeji ezili-134 ukwenza ezona ziLuhlu luLungileyo kwiiVets ngo-2020.
Kutheni le nto iiHodges zilunge kakhulu kwiiVets?
Sinikezela ngamaZiko eeNkonzo zoGqirha uPeter Thomas azinikeleyo kwiikhampasi zethu zaseNaples naseFort Myers ezinamagqala, zamagqala.
Iinkqubo zethu zesidanga ngabasebenzi abagxile kwimisebenzi abanqwenela ukuyenza amagqala amaninzi.
Sihambisa imihla yokuqalisa kwekhosi yenyanga ehlangabezana neemfuno zeshedyuli yamagqala.
Iindawo zokupaka ezizodwa ezenzelwe amagqala ethu kwikhampasi nganye.
Ukufunda ngakumbi malunga nokuba kutheni iHodges U ilunge kakhulu kwiiVets, funda lonke inqaku ku Iveki yeFlorida.
IYunivesithi yaseHodges, indawo evunyelweyo yommandla, yabucala engenzi nzuzo esekwe kwi-1990, ilungiselela abafundi ukuba baphakamise imfundo ephezulu kwimisebenzi yabo yobuqu, yobungcali kunye neyasekuhlaleni. Ngaphezulu kwabafundi abaphumelele i-10,000 benepesenti ye-93 yempumelelo eqhubekayo kwimisebenzi, i-Hodges yamkelwe ekuphuhliseni iinkqubo eziyilelwe ngokukodwa kwaye zisiwe ukusebenzela abantu abadala abahlukeneyo. Ngeekhampasi eNaples naseFort Myers, eFlorida, iHodges ibonelela ngemini eguqukayo, ngokuhlwa, kunye neeklasi ezikwi-Intanethi ezifundiswa li-class-class faculty kwizidanga zokuqala kunye nezidanga. IHodges ikhethwe njengeZiko lokuHanjiswa kweSpanishi, kwaye lilungu loMbutho wamaSpanishi weeKholeji neeDyunivesithi (HACU). Olunye ulwazi malunga neYunivesithi yaseHodges luyafumaneka IiHodges.edu.
tags: Iikholeji ezilungileyo zamagqala, IHodgesU, Iikholeji zamagqala, Iiyunivesithi zamagqala